YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, March 17
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်ကိုင်း NLD နှင့် တွေ့ ဆုံစဉ် ဟောပြောချက်
BY YeYint Nge ... 3/17/20110comment
17 March 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3136K View Download
17 March 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2185K View Download
17 March 2011 Yeyintnge's Diary
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မမိုးကလျာဦးနှင့် တံတားနီနေ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း၊
Thursday, 17 March 2011 16:55 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
လစ်ဗျား ကိစ္စအပေါ် ပြင်သစ်ရဲ့ တုံ့ပြန့်ပုံက တူနီရှားနဲ့ အီဂျစ် လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကလို ခပ်ရှော်ရှော် မဟုတ်တော့။ ဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားတယ်မသိ၊ ယခု ရက်ပိုင်း ပြင်သစ် အတော် တိုးတက်လာတယ် ဆိုရမည်။
ပြင်သစ်သမ္မတ ဆာကိုဇီက ကဒါဖီ အစိုးရကို ဖိအားပေးလာသည်။ သူပုန်တွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လေယာဉ် မပျံသန်းရ ဇုံကို တွန်းပေးနေသည်။ ဒီအတွက် ကဒါဖီ သားအဖက အရင် သမ္မတ ဆာကိုဇီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့တဲ့ ငွေတွေ ပြန်တောင်းနေသည်။
ကဒါဖီရဲ့ သား ဆာအိဖ် အယ်လ် အစ္စလာမ်က သမ္မတ ဆာကိုဇီ ကို “ကျူပ်တို့ပေးခဲ့တဲ့ ငွေတွေ ပြန်ပေး” ဟု အင်တာဗျူး တစ်ခုပြောရင်း အော်တောင်းသည်။ CNN သတင်းထောက်က ကဒါဖီ့ သားကို “အခု ပြင်သစ်က လစ်ဗျားမှာ ကြားဖြတ် အစိုးရ ဖြစ်ဖို့ တောင်းဆိုနေတယ် ခင်ဗျား သဘောထား ဘယ်လိုရှိလဲ” မေးကြည့်တော့ ဆာအိဖ် က
“ဆာကိုဇီ ဟာ သူရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ဖို့ လစ်ဗျားက ယူသွားတဲ့ ငွေတွေ အရင်ဆုံး ပြန်ပေးရမယ်။ ကျူပ်တို့ သူ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးနိုင်ဖို့ ငွေအများကြီး ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့တယ်။ ကျူပ်တို့မှာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ အတိအကျ ရှိတယ်။ အကုန်လုံး ဖွင့်ချလိုက်ဖို့ အသင့်ပဲ” ဟု ဆိုသည်။
ဆက်ပြီး သူက “အဲဒီ ပြောင်ချော်ချော်ရုပ်နဲ့ ဆာကိုဇီ ကို ပထမဆုံး ပြောချင်တာက လစ်ဗျားက ငွေတွေ ပြန်ပေးပါလို့။ လစ်ဗျားကို သူအမြဲကူပါမယ်ဆိုလို့ ကျူပ်တို့ ပိုက်ဆံတွေ ပေးလိုက်ရတယ်။ အခု သူက ကျူပ်တို့ကို စိတ်ပျက်အောင် လုပ်နေပြီ။ ကျူပ်တို့ ငွေတွေပြန်ပေးပါ။ ကျူပ်တို့မှာ ဘဏ်စာရင်း အတိအကျနဲ့ ငွေလွှဲတဲ့ အထောက် အထားတွေ အားလုံး ရှိပါတယ်။ မကြာခင် လူသိရှင်ကြား ဖွင့်ချပစ်မယ်” ဟု ပြောခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အနောက်နိုင်ငံများက ကဒါဖီ ရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံးကို ချိတ်ပိတ်လိုက်သည်။ ကဒါဖီ သားအဖက အနောက်မှ ခေါင်းဆောင်အချို့ကို အရင် လက်ဖွာခဲ့သမျှ ပြန်လိုချင်နေကြသည်။ ကဒါဖီ သားအဖကို မြန်မြန်ှရှင်းပစ်မှပဲ သူတို့ သားအဖနဲ့ မကင်းတဲ့ သူတွေလည်း စိတ်ချမ်းသာနိုင်မည်။ ဒီအတွက် ယခု လုံခြုံရေးကောင်စီ လည်း အသက်ဝင်လာပြီ။
မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း Source: FP & CNN
ကျနော်ရဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က ဗွီစီဒီလေးတချပ်လာပေးပြီး ကော်ပီကူးပေးပါဆိုလို့ ကူပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော်က ဘာကားလဲမေးတော့ အစ်ကိုလည်းကြည့်ပါဆိုလို့ ကူးပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်၊ အားလားလား…. ကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ ဘိုး တော်ချုပ် စောဘိုမြရဲ့ ဈာပနအခန်းအနားကို ရိုက်ထားတဲ့ အခွေပေါ့။ တချိန်က အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ သူ့အကြောင်း တော်တော်လေး သိခဲ့ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ ခုတော့ သင်္ခါရတရားကို သူလည်း မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ကျနော်က စစ်သားလုပ်ခဲ့တဲ့ လူဆိုတော့ အတွေးထဲမှာ ငါတို့နဲ့ သေနတ်အပြန်အလှန်ပစ်နေတဲ့တယောက် မရှိတော့ဘူးပေါ့ အဲဒီလို့ခံစားမိတယ်။ ဒီလောက်ပဲတွေးပြီး ဆက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ အတွေးနယ်ချဲ့မိတယ်။
ကျနော်တွေးမိတာက ၁၉၉၁ …
ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ပွဲဆိုရင် ကရင်သူပုန် ဘိုကလေး၊ မြောင်းမြဘက် စိမ့်ဝင်နေပြီ၊ တပ်နဲ့ ထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီး အပ်နဲ့ မထွင်းပဲ ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ (နတခ) တိုင်းမှူးက ဗိုလ်ချုပ် မြင့်အောင်၊ ဘယ်လောက်အထိ နှိပ်ကွပ်ခဲ့သလဲဆို လေတပ်က ရဟတ် ယာဉ် ၂ စီးကို ဦးစီးချုပ်ဆီကနေ တောင်းယူပြီးလယ်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ သူပုန် နဲ့ ဆက်စပ်မယ်ထင်တဲ့ နေရာတွေကို လက်တည့်စမ်းခဲ့တယ်။ တပ်ချုပ်ကလည်း ဘာကြောင့်ပေးသုံးခဲ့သလဲဆိုရင် ၀ါဆောစာချုပ်ဖျက်ပြီး ဘ၀ပျက်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင် တွေထဲက ပိုလန်နဲ့ ရုရှက မြန်မာပြည်ကို ဆန်နဲ့လဲတန်လဲ၊ ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်း လိုရောင်း လုပ်ထားတဲ့ မီ-၂ နဲ့ ဆူဂေါ ရဟတ်ယာဉ်တွေကလည်း ၀ယ်ထားပြီး မ စမ်းရသေးခင် အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။
အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (နတခ) မှာ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတဲ့ ရန်သူကို တွေ့လိုက်ရတော့ တိုင်းမှူးပြာယာ ခတ်ပြီး ဆော်တော့တာပေါ့၊ သူကိုယ်တိုင် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တက်၊ မသင်္ကာစရာ လယ်တဲတွေ့ရင် အောက်ကိုဝိုင်းခိုင်း ထားပြီး အပေါ်က ရော့ကက်ခ်နဲ့ပစ်တယ်။ ထွက်ပြေးလာတဲ့ အမာခံ (ရွာသားနဲ့ သူပုန်ခွဲမရရင်သုံးတဲ့ သတ်မှတ်ချက်)ကို ဖမ်းတယ်၊ တိုင်းမှူး အမိန့်ပေးတာက (ငါ အသံမကြားချင်ဘူးတဲ့) ဘာလုပ်လိုက်တယ်ထင်သလဲ၊ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ရိုက် သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကို ပြန်ကြည့်ရင် မိုက်တန်စန်နဲ့ မူးနေတဲ့ ဆိုက်ကားသမား ထိုးသလိုပါပဲ။
အာပီဂျီ လက်ထဲမှာရှိပြီး မပစ်တတ်သေးတဲ့ အမာခံဟာ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးအောက်မှာ အသက် ပျောက်သွားရရှာတယ်၊ အချို့ရွာသားတွေသေသာသေသွားတယ်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကေအန်ယူ ဟုတ် မဟုတ်တောင် မသိသွားရှာဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကေအင်ယူက စပြီး စိမ့်ဝင်ကာစရှိသေးတာ တကြောင်း၊ စည်းရုံးရေး ကာလ ဖြစ်နေတာတကြောင်း၊ မိုးတွင်းကာလ၀င်သွားတာ တကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ အခြေခံ စစ်သင်တန်းက မစရသေးတာ တ ကြောင်း၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အရှုံးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ပြောရရင် အဲဒီ့ပွဲက ကရင်သူပုန် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် စိမ့်ဝင်တာ ကို တပ်က အသိစောပြီး စစ်ဦးဘီလူး ပုံစံလုပ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် ခေတ်ပေါ့။
အဲဒီ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ တိုင်းမှူးလည်း လူတွေတော့ သေသင့်သလောက် သေပြီးပြီ (ကိုယ်လည်း သတ်သင့်သလောက် သတ်ပြီးပြီ) ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုပြီး ယတြာချေတယ်ထင်ပါ့၊ နတခ ၀န်းထဲမှာ ကိုးလံပြည့်စေတီကို ကိုးရက်နဲ့ အပြီး တည်တော့တာပဲ။ ရှိသမျှလိုင်းထဲက မိန်းမရော၊ ကလေးပါ အိမ်ထောင်ဦးစီးစစ်သားကြီးရဲ့ ကျွန်ဝယ်ရာအဆစ်ပါ ဇာတ်ကို ၀င်ကခဲ့ရတယ်။
တိုင်းမှူး ဘုရား၊ စစ်သားကောင်းမှုပေါ့နော် …
တပ်ချုပ်ကြီးကလည်းမြှောက်စားပါတယ်။ စစ်ရေးချုပ်ရာထူးပေး၊ စစ်ရုံးခေါ်ထား၊ ပြီးတော့ လယ်ဆည်ဝန်ကြီးပေးပြီး ဆက်တိုက်မြှောက်စားလိုက်တာ၊ နောက်ဆုံး ၀န်ကြီး ၁၇ ယောက်ကိုဖြုတ်တဲ့အထဲ ထည့်လိုက်တဲ့အထိပဲ၊ ထွန်းကြည်၊ ကျော်ဘ၊ မောင်လှ၊ ကျော်မင်း၊ သိန်းဝင်း၊ သန်းညွန့်၊ စိန်အောင်၊ ဖေသိန်း၊ မျိုးညွန့် စတဲ့ စီနီယာ န၀တ အုပ်စုဝင်တွေကို လာဘ်စားမှုနဲ့ ဖမ်းစစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ သိမ်းလိုက်တာ နေစရာအိမ်တောင် ဘုံပျောက်သွားတဲ့အထိ ဂျူနီယာ န၀တ က သူကောင်းပြုလိုက်တာ မရှုမလှခံလိုက်ရတယ်။
သူများကိုသတ်ခဲ့တဲ့လူ၊ ဘုရားတည်တာတောင် Force Labour သုံးခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ် တယောက်၊ ဘယ်လိုလဲ ဘ၀ တောင် မကူးလိုက်ပါလား၊ ၀ဋ်ကြွေးက ကြီးလိုက်တဲ့အမျိုး (ဒါတောင် တိုင်းမှူးတယောက်ရဲ့ နိဂုံးပဲရှိသေးတယ်)။
တွေးရင်းနဲ့ ကြည့်လက်စ ဈာပနအခမ်းအနားကို ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်၊ တောထဲမှာလုပ်တဲ့ ဈာပန၊ ငိုတဲ့သူတွေက ငိုကြ၊ တော်တော်များများရဲ့မျက်နှာက ၀မ်းနည်းနေကြတဲ့ မျက်နှာတွေ၊ တယောက်ပြီးတယောက် လာကန်တော့ကြ တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ကေအင်ယူ စစ်အခမ်းအနားနဲ့ ယူနီဖေါင်းအပြည့်အစုံဝတ်ပြီး နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ကြ တယ်။ စထွက်တဲ့နေရာကနေ နောက်ဆုံးသင်္ဂြိုလ်တဲ့နေရာအထိက တော်တော်ဝေးတယ်။ ထမ်းလာတဲ့လမ်းတလျှောက်
လိုက်ပို့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်က ငိုလို့ပေါ့။
အဲ့ဒီမှာ ကျနော်ရဲ့အတွေးတခုက ဒိန်းကနဲ ၀င်လာတယ်။ ဒီလူတွေဟာ တကယ်ငိုကြတာလား၊ မကောင်းတတ်လို့ ဟန် ဆောင်ပန်ဆောင် ငိုကြတာလားဆိုတာ။ အခွေကို ပြန်ရစ်ပြီး ငိုကြတဲ့သူတွေမျက်နှာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ တမင် ဖန်တီးပြီး လန်ကျုပ်ငိုတာ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ် ၀မ်းနည်းမှုနဲ့ ငိုတဲ့မျက်နှာဆိုတာ ပေါ်လွင်လာတယ်။ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင် တွေဆိုလည်း ဒီလောက်များမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊
သြော်.. သိပြီ… ဒါတွေက သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေ (သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူ့ပြည်သူတွေ) ဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ပြီးတွေးစရာက အသက်လည်းကြီးနေပြီ၊ အနားလည်း ယူသင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ တပ်ချုပ်ကြီး အတွက်ပါ။ ကဲဗျာ….
တပ်ချုပ်ကြီး အခုသေသွားရင် ခင်ဗျားငိုမှာလား … မေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးလို့ဆိုပြီး ကျနော့်ကို မဆဲနဲ့လေဗျာ၊ ခင်ဗျားလည်း ပြည်သူတဦးမဟုတ်လား… တောထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်သေတာတောင် သူ့လူတွေ ငိုကြသေး တာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က မြို့ပေါ်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ လူတွေလေ၊ ပိုပြီးမငိုသင့်ဘူးလား အဆင့်မြင့်မြင့်တောင်
ဟုတ်တော့ … ဟုတ်တယ်ဗျ… (အခုသေမယ်ဆိုရင်တောင်) တပ်ချုပ်ကြီးအတွက်ကို စိတ်ကူးနဲ့တောင် ၀မ်းနည်းလို့မရ ဘူး၊ ၅၉ သန်းသော ပြည်သူတွေထဲက ၁% လောက်တောင် သူ့ဘက်က မကျိန်းသေဘူး၊ မြန်မြန်သေပါစေလို့ ဆု တောင်းနေကြပြီ။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကြီးသူကိုရိုသေတယ်ဆိုတဲ့ ဂါရ၀တရား ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ၊ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ် တဲ့သူကို စိတ်ထဲကနေတောင် မပြစ်မှားကြတဲ့သူတွေ၊ အခုဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ.. ပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က အရမ်းအမျိုးချစ်တတ်တဲ့ လူမျိုးဗျ၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးအရင်းမဟုတ်ရင်တောင် မြန်မာဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် (ပြည်ပမှာဆိုရင်တော့ ပိုသိသာတယ်) ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကစည်းလုံးပြီး သားပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အောက်ကျမခံခဲ့တဲ့စိတ်ဓါတ် အရမ်းကြီးတဲ့လူမျိုးမှပဲ။
မင်းဆိုးမင်းယုတ်တွေ အုပ်ချုပ်တာ နှစ်ရှည်လများခံခဲ့ရတယ်။ သီးခံခြင်း၊ ရောင့်ရဲခြင်းတွေနဲ့ စောင့်ဆိုင်းခြင်းတွေအောက် မှာ လူစဉ်မမီတဲ့ လူ့ဘ၀ကို ဖြစ်သလိုတည်ဆောက်နေကြရတယ်၊ စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ယူပြီးမှ လူတွေက ပိုပြီး ဆင်းရဲတွင်းနက်လာတယ်၊ ပညာပိုပြီးမဲ့လာတယ်။ ၀မ်းရေးကို ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ရင်းပြီး ဖြေရှင်းနေကြရတယ်၊ ဒီလိုအ ချိန်မှာ ထွက်ပေါက်အမျိုးမျိုးကို စဉ်းစားကြရင်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဆုံးမနိုင်မယ့် နည်းအားလုံးကို တွေးကြတယ်။ UN တပ်ကိုမျှော်မိတာ၊ နိုင်ငံစုံတပ်ကို မျှော်မိတာ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ လိုအပ်မှုတခုက တောင်းဆိုလို့ ဖြစ်လာကြတာ၊ ပြည်သူ တွေက လောဘတကြီးနဲ့ အနောက်မျှော်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အားကိုးရှာကြတာပါ၊ ဘယ်သူက တိုင်းတပါးသားကို အားကိုးချင်မှာလဲ။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သံဃာတော်တွေကို ရိုက်တယ်၊ သတ်တယ်။ ပြည်သူတွေ ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် နှိပ် ကွပ်တယ်။ မထင်ရတဲ့ ရက်စက်ခြင်းတွေနဲ့ အာဏာကိုမြဲအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သား လုပ် ရင်တောင် ဒီလိုကိစ္စမျိုးက ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပေးရမယ့်အနေအထား၊ အာဏာနဲ့ နေရာကိုထိရင် ရေဆုံးမြေဆုံး ရက်စက်တတ်သူပါ။
ခုချိန်ခါ သာသနာ့တာဝန် ထမ်းနေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို မေးကြည့်ရင်တောင် သေနတ်ချင်းယှဉ်ပစ်မလားဆိုရင် ငါး ပါးသီလမှာ တပါးဖြစ်တဲ့ သူတပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းကို မကျူးလွန်ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေတောင် ကျုပ်တို့ရဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးကို ယှဉ်ပစ်ချင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာလည်း တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေပဲမဟုတ်လား။
ကြည့်နေတဲ့ ဈာပနအခွေလည်း ပြီးသွားပြီ။
မပြီးသေးတာက ကျနော့်အတွေး …
တပ်ချုပ်ကြီးသေရင် ဘယ်သူတွေလိုက်ပို့မှာလဲ …
အဲ.. ကျိန်းသေတာကတော့…. ဟန်ဆောင်ပြီးငိုမယ့်၊ ဒါမှမဟုတ် အခကြေးငွေနဲ့ငိုမယ့် စွမ်းအားရှင်နဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေတော့ ရှိနေဦးမှာပါ၊
ICG စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းရေး အစီရင်ခံစာအကြောင်း
By ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 16 မတ် 2011
ဒီတပတ် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းသုံးသပ်ချက် ဆွေးနွေးခန်းမှာ ဦးကျော်ဇံသာ က အရှေ့ တောင်အာရှ စီမံကိန်း ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Jim Della-Giacoma ကို ဆက်သွယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းသင့်တယ်လို့ ICG (International Crisis Group) နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ ကို သုံးသပ်ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ICG အစီရင်ခံစာရဲ့  ထောက်ခံတင်ပြချက်တွေမှာ အဓိကအချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိတဲ့ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းရေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ ကျနော်တို့ ထောက်ခံတင်ပြထားတာတွေ အတော်များပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ် တိုးတက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်ကြည့်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းဖက်က ပြောင်းလဲသင့်တဲ့အချက်တွေလို့ ထင်ပါတယ်။ ပထမအချက်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေကို မပိတ်ပင်ဘဲ အတော်မြှင့်မားတိုးတက်လာတဲ့အထိ ပေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့တွေက နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေကို ရပ်ဆိုင်းထားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အပံ့တွေကိုတော့ ပြန်ပေးသင့်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပတို့ရဲ့  ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်း လုံးဝရုတ်သိမ်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ပြဿနာ ရုတ်တရက် ပြေလည်သွားမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့  ဘဝအခြေအနေ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ အခု သုံးနေတဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေက သိပ်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှု၊ မြန်မာအထည်စက်ရုံတွေကို ပိတ်ပင်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့တွေကို ပိတ်ပင်မှုတွေ။ ဒါတွေဟာ targeted sanctions လို့ခေါ်တဲ့ ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့မှု မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သိပ်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ သာမန်ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံလို့ အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်က လူထုရရှိနေတဲ့ အကျိုးစီးပွားမျိုးကို မြန်မာပြည်သူတွေ မရရှိနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အရေးယူပိတ်ဆို့မှု၊ ကုန်သွယ်ရေး ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ အေဂျင်စီတွေရဲ့  အထောက်အပံ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေဟာ ပစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ သိပ်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ သာမန်လူထုကို နစ်နာစေပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရတဲ့ အကျိုးခံစားမှုမျိုးကို မြန်မာလူထုမရရှိနိုင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ICG အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေကို သုံးသပ်တဲ့အခါကြတော့ အာဏာပြအုပ်ချုပ်မှုက ဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်၊ ဘာမှ တိုးတက်တာ မတွေ့ရသေးဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲကလည်း အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အမှန်အတိုင်း သုံးသပ်ရေးသားထားတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထောက်ခံတင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ သိပ်ကိုလျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ အကောင်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ အစီရင်ခံစာဟာ ရှေ့ နောက်မညီညွှတ်ဘူးလို့ ဆိုရင် မှားပါသလား။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျင့်သုံးလာတဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု ရလဒ်ကို ကျနော်တို့ ကြည့်ပါတယ်။ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ အခုအခါမှာ အစိုးရတရပ် ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ချည်းကပ်မှုတရပ်တောင်းဆိုပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကို အပြစ်ဒဏ်မခတ်တဲ့ ချည်းကပ်မှုကို ကျနော်တို့ တောင်းဆိုလာခဲ့တာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုတာပါ။ အခုအချိန်ကာတော့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၊ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ အခါအခွင့်သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ (၃း၅၀)
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ICG အနေနဲ့ ဒီလို ထောက်ခံချက်တွေမလုပ်ခင်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့  တင်ပြချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါသလား။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု၊ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းစေချင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အရင်လုပ်ပါလို့ အန်အယ်လ်ဒီ က အကြံပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကို လူကြီးမင်းတို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသလား။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Davos (World Economic Forum) မှာ စကားပြောတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီမြုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ကိစ္စကို အပြုသဘောနဲ့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အခု ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေထဲမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မပျက်သုဉ်းရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ကုမ္မဏီတွေ၊ လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုတွေကို ခေတ်သစ်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီ လိုက်နာတဲ့ ရင်နှီးမြုပ်နှံမှုတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ကုမ္မဏီတွေ ရင်းနှီမြုပ်နှံမှုတွေကို လက်ခံသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်တဲ့နေရာမှာ ရှေ့ တန်းကပါဝင်တဲ့ အမေရိကန်က အခု အိုဘားမား လက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အယူအဆကို နည်းနည်းပြုပြင်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဖက်က တိုးတက်မှုတစုံတရာ ပြသလာရင် နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မှာကို အဆင်သင့်ပဲလို့ ပြောဆိုနေပါတယ်။ ဒါဟာ မလုံလောက်ဘူးလား။ တင်းမာတဲ့သဘောကို ပြသနေဆဲပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါသလား။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒါပေမဲ့ တချို့  ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေက ပြောကြပါတယ်။ Sanction တွေ တင်းကြပ်မှုတွေကို လျှော့ပေးလိုက်ရင် စစ်အစိုးရက သူတို့လိုရာဆွဲပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိမ့်မယ်။ သူတို့အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ရေးအတွက် အသုံးချမယ်။ သူတို့က တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုတယ်ဟေ့ သူတို့ လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလို လုပ်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် sanction တွေ ဆက်ထားသင့်တယ်လို့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေက ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီလို ယူဆနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေ မရှိဘူးလို့ ထင်ပါသလား။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ ကျန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ ကျင့်သုံးနေတဲ့ကိစ္စကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာ အောင်မြင်နေပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတယ်၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်တယ်၊ ပြည်ပရင်းနှီမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ တံခါးဖွင့်စေတယ်။ သာမန်ပြည်သူတွေဆီကို အကျိုးအမြတ်တွေ ရောက်ရှိစေတယ်။ အထီးကျန်ပြစ်ထားတဲ့ မူဝါဒက အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုပြီးတော့ အထီးကျန်ဖြစ်စေပါတယ်။ လူထုအတွက် အကျိုးယုတ်စေတယ်။ နိုင်ငံတကာ တိုးတက်မှုတွေကို လက်လွှတ်စေတယ်။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီနဲ့ ဆက်နွှယ်ဖြစ်ထွန်းစေမယ့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုတွေကိုလည်း လက်လွှတ်သွားစေပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ ရာထူးတစုံတရာမရှိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွှမ်းမိုးကြီးစိုးမှုကလည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ လစ်ဗျားမှာ ကြည့်ပါ။ ကဒါးဖီး က သူ့မှာ ဘာရာထူးမှမရှိဘူး၊ ထွက်ပေးစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောနေတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။
Mr. Jim Della-Giacoma ။ ။ ဒါမျိုးက နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ရှိနေပါတယ်။ အာဏာအပြောင်းအလဲလုပ်ရာမှာ မြင်ကွင်းနောက်ကွယ်က လူတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ထောက်ခံတင်ပြတာက ဒါကို စောင့်ကြည့်ပြီး လိုက်လျောညီထွေစွာ လိုက်လံပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။